Lululemon (LULU) Oovimba abagciniweyo
Udidi: I-Lululemon (LULU)
I-Lululemon yokuthenga ngentengiso ebekwe kwi-rocket eYurophu nase-Asia
Ukuhlaziywa: 2 Februwari 2021
ILululemon Athletica (LULU) ithathe iNyakatho Melika ngemidlalo yayo kunye nokunxiba okungaqhelekanga.
Umthengisi weempahla zemidlalo esekwe eCanada ubengumntu ophumeleleyo kwindyikityha yokufa, njengokuhlala kubasebenzi basekhaya batshintshe iisuti kunye neelokhwe zabadanisi kunye nemilenze.
Kodwa izabelo zayo bezikwisilayidi ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, emva kwesikhokelo esihlaziyiweyo se-Q4 FY2020 (ixesha liphele nge-31 kaJanuwari).
Kwiphepha le-11 kuJanuwari elaliphethe isigqeba, u-Calvin McDonald uthe: “Siyavuya ngamandla ngexesha leholide njengoko utyalomali lwethu eLululemon nase Mirror lusivumele ukuba sinxibelelane neendwendwe ngokwasemzimbeni nangokwamanani. Siqinisekile ngamathuba ethu ngo-2021 kwaye sizibophelele kwisicwangciso sokukhula kwamandla ethu. ”
Abatyalomali akufuneki bamfanyekiswe kukudana kwabahlalutyi kwisikhokelo
Kodwa elo themba lilandelwe kushicilelo oluncinci oluchaze ukuba "izinga lokukhula kwingeniso iyonke ukuba ibe kwinqanaba eliphezulu lokulindela ulutsha oluphakathi ukuya phezulu" kwaye yahlengahlengisa i-EPS ukuba ize kwisiphelo esiphakamileyo samanani ayo aphakathi. okulindelweyo.
Ubungacinga ukuba oko kuya kuyonwabisa imakethi, kodwa ibingeyonto ibethwayo eqhelekileyo ukuba abahlalutyi sele beyiqhelile kwaye izabelo zawa ezindabeni.
Abanye abahlalutyi babelindele ukuba i-LULU izise ngaphambili uqikelelo olutsha lokuthengisa kumantla e-20%.
I-LULU ayizikhuphi iziphumo ze-Q4 kude kube ngumhla wama-31 kweyoKwindla kodwa ukuba iziphumo zekota yesithathu zisisikhokelo, ukuthengisa kungalindeleka ukuba kukhule kwisiqwengana esizinzileyo.
Kwi-3Q i-LULU ibonise indlela ekwazi ngayo ukuqhubeka nokukhula ngaphandle kokuchaphazeleka kokuvalwa kwevenkile njengoko yayiqhubeka nokwandisa umkhondo wayo we-e-commerce kwaye igcina ishedyuli yayo yokuvula ivenkile.
Ukuthengiswa kwekota yesithathu bekuyinto ebabazekayo ye-1.1 yezigidigidi zeedola, ebikade inyuke ngama-22% kunyaka ophelileyo, kunye nokukhawulezisa ukusuka ekuqalekeni kokuthintitha ukuya kunyaka obone ukubuyela umva kwizabelo ngoJuni emva kokuba iziphumo zibeke elubala ubhubhane weCovid Kwisiqingatha sokuqala.
Ngelixa uninzi lwezitena kunye nokusebenza kwabathengisi basemdakeni kuye kwadamba kwiindawo zokubamba, ukuba akubabonanga bethandana namava okusondela ekufeni, uLULU uhambe emandleni. Ayiyonxalenye encinci ngenxa yendlela elibeke ngayo ishishini layo ekuthatheni ithuba le-e-commerce.
Ngamaxabiso ezabelo kude kakhulu ngalo lonke ixesha kuma-398 eedola aprintwe nge-2 kaSeptemba kunye nexesha elikufutshane eliphezulu leedola ezingama-367 ezirekhodwe nge-7 kaJanuwari, itshaneli ye-bearish yangoku inokuba buthathaka.
Itshati yamaxabiso eLululemon Athletica nge-2 kaFebruwari 2021 (ngaphambi kwentengiso), amakhandlela eentsuku ezi-1. Ngokunyanisekileyo ukuThengisa
I-LULU ibinyuke nge-1.46% izolo (ngoMvulo umhla we-1 kaFebruwari), ivala i- $ 333.
Izicwangciso zokwandisa ziya kuqhuba ukukhula kwemali
Inxalenye yesicwangciso sokukhula seLULU, esichazwe nguMcDonald kubandakanya ukwanda okwandisiweyo eMpuma Asia naseYurophu.
Ngokucacileyo, ngobhubhani onyanzela amazwe amaninzi ukuba abe ngamanqanaba ahlukeneyo okutshixa, ayisiyondawo intle yokuqalisa ukuvulwa kwevenkile. Kodwa iivenkile zayo-ezinje nge-Apple-ayisiyiyo enye indlela yokuthengisa ngaphakathi kubo, kodwa iivenkile zevenkile, ukuba uyathanda, kunikezelo olubanzi lwebhrendi edlala indlela yokuphila, yiyo loo nto inkcazo yabathengi / abathengi njengeendwendwe.
Kwi-2020 ivule iivenkile ezingama-30 ukuya kwezingama-35 kwaye inezicwangciso zokuvula inani elifanayo kulo nyaka. Kananjalo nokwakha ubukho bayo eMpuma Asia eJapan, China, South Korea nase-Australia, inkampani ijolise e-UK naseJamani njengamathuba amakhulu okukhula. Ngoku uLulu uneevenkile ezili-16 e-UK.
Kuphela yi-14% yengeniso kwikota yesithathu evela ngaphandle kweNyakatho Melika, kwaye umphathi olawulayo uMcDonald ufuna ukuyonyusa ukuya kwi-50%.
Ukukunceda kolo hambo yayikukufunyanwa kwesipili sezixhobo zokuqina komzimba kunyaka ophelileyo.
Inkampani ikwajonga ukwandisa ukuthengisa emadodeni.
Izicwangciso zokwandiswa kweYurophu ziya kuncedwa kakhulu ngokuqesha u-André Maestrini wase-Adidas - wajoyina iLululemon ekuqaleni kwalo nyaka.
Yeyiphi imingcipheko ekuthengeni isitokhwe seLululemon?
Imingcipheko yeLululemon, kubandakanya ukukhululeka kwabo bakhuphisana nabo banokuyiphindaphinda impumelelo yayo (nangona kungekho namnye okwenzileyo okwangoku) kunye nokuma okuphezulu kwebrendi, okuthetha ukuba abathengi abaninzi baya kuxhoma amaxabiso abo. I-sweatpants ithengisa nge-120 yeedola, enokuthi ngaphezulu kwe-10x indleko zabo ePrimark.
Nangona kunjalo, ngokudodobala okumile kwe-K ukubona ukwahlula phakathi kwabaphumeleleyo kunye nabaphumeleleyo kwindyikitya yokufa, ngokungathandabuzekiyo kukho inani labantu abadumbileyo abalondoloze imali kunye nokutshintsha iipateni zenkcitho ngokuchanekileyo kwizinto ezithengiswa nguLululemon.
Indawo efanelekileyo yokungena kubatyali mali abatsha eLululemon
Ngeziphumo ezizayo ekupheleni kuka-Matshi kwaye ukukhutshwa kwamachiza kulindeleke ukuba kukhawuleze kwiimarike ekujoliswe kuzo, ixabiso langoku libonisa indawo efanelekileyo yokungena kubatyali mali abatsha abanqwenela ukukhwela umzi omtsha wokuhlala-ekhaya-wasekhaya isethwe ukuba ibe ngumtshangatshangiso osisigxina.
Kwinkcazo zakhe ngomhla we-14 kuJanuwari uMcDonald wagxininisa ukuba 'iindwendwe' zenkampani zenza imfuno yokuba uLululemon “akakwazanga ukwanelisa ngokupheleleyo”, esolatha ukomeleza intengiso phambili, nanjengoko kubuyela eofisini kunye nemisetyenzana yangaphandle ibuya.
“Nangona i-intanethi yenze kakuhle ngendlela engathethekiyo, siyazi ukuba kusekho inani elikhulu leendwendwe ezithengayo kuphela. Ndilubonile utshintsho kwelindwendwe lifuna ntoni. Ndiyakholelwa ukuba iyazinza kwaye khange sikwenze nangayiphi na indlela ukwanelisa ibango ngo-2020 lokuba olo tshintsho luza kudala eli thuba, ”utshilo uMcDonald.
Uqhubeke wathi: “Kwaye njengokuba abantu bebuyela umva ngaphandle, bebuyela e-ofisini- oku kuyakwenzeka ngo-2021 - akukho mathandabuzo engqondweni yam ukuba ithuba kunye nemfuno yemveliso yethu kunye nesinxibo esinemisebenzi emininzi sinethuba elide lokukhula phambi kwethu, kwaye yile nto siqhubeka ukukhokelela kuyo. Andikholelwa ukuba kukho ukutsala phambili. Ndicinga ukuba kukho ibango uLululemon angakwazanga ukulenza ngokupheleleyo. ”
Ungajonga ividiyo yeengxelo zikaMcDonald apha:
Ixabiso lethu elikufutshane ekujoliswe kulo li- $ 367.
tags I-Lululemon (LULU), isitokhwe somthengisi, iingcebiso zesitokhwe